Imba Yeruwa Yechikoro Inopaza "Yekare Uye Yakasakara" Uye Yodzorera Hupenyu Hwakanaka｜Shuangbao Dhizaini - Yakanakisa Kitchen Faucets 2021 | Yakanakisa Bathroom Faucets | WOWOW Faucets
musha / Interior design / Imba Yechikoro Dunhu Inopaza Kupfuura neiyo "Yakare Uye Yakashongedzwa" Uye Inotangazve Hupenyu Hwehupenyu ｜ Shuangbao Dhizaini
Imba Yechikoro Dunhu Inopaza Kupfuura neiyo "Yakare Uye Yakashongedzwa" Uye Inotangazve Hupenyu Hwehupenyu ｜ Shuangbao Dhizaini
2021 / 08 / 15 kupatsanuraInterior design 4249 0
Yemukati Design Alliance
Ichi chirongwa chakakosha kwazvo. Kwemazuva mazhinji nehusiku hwadarika, tanga tichitaurirana nemuridzi wemba kuburikidza nharembozha kweanopfuura makiromita chiuru. Pekupedzisira, kugadziridzwa kweiyi imba yechikoro yemakumi mapfumbamwe emamirimita metres kwakatangira muchirimo chiri chayo. Kunyangwe mudzidzisi wekumisikidza paakapinda mumba kuburikidza neyakafanira matumba hutong, akashamisika: “Handina kuzviziva izvo kusvikira ndauya kuzozviona. Kune imba yakanaka kudaro mune yekare imba. ”
Nezve "izvo" munguva yakapfuura
Iyi kesi ipuro-yekusaiti chirongwa chiri muFuzhou, iri makore makumi matatu ikozvino. Iyo nharaunda iri mukati me suite ndeye 30 mativi emamita. Mukati maro mune chekare uye mwenje hauna kunaka. Kurongeka kweimba kunonetsawo. Kuwanda kwemakamuri hakuna kukwana zvachose. Kechipiri mabasa mazhinji ekuchengetedza haagone kuitiswa. Kudzidza kwevana hakukwanisi kugutsikana kana. Kune zvese zvataurwa nemuridzi wemba, ino imba yedunhu yechikoro inogona kunge iine makore gumi ekurarama. Uye natete vanogara, izwi rekutanga rinouya mupfungwa kana tichifunga nezve dzimba dzekuchikoro redunhu kazhinji "zvinokanganisa", sezvo isu tine maratidziro akafanana ekurwadziwa. Kune nzvimbo yakaganhurirwa, hupenyu huzere. Tinogona here kutaura nezve chiitiko chehupenyu?
Nekudaro, mushure mekugadziriswa dhizaini, yega nzvimbo ine mwenje yakazvimirira. Chiyero chechiedza chinouya munzvimbo yakajairika chakanyanya kuwanda-angled. Iyo nzvimbo yakabviswa madziro ese uye marongero akarongedzwa zvakare. Izvi zvinogutsa mashandiro emakamuri matatu, dzimba mbiri dzekugezera uye yekudzidzira uye yekuchengetera imba, uchiziva kubatana kwekuvapo kwekuita uye dhizaini yehunyanzvi. Huwandu hwekuchengetedza hwakawedzerawo zvakanyanya uye kushandiswa kwenzvimbo kwakapetwa kaviri. Izvi zvakagadzira hupenyu huri nani muridzi wemba. Pazuva rakapedzwa, muridzi wemba akati, "Rakanaka kwazvo, handidi kana kuzotengesa gare gare."
"Kutsemura" dambudziko rekare rekugadzirisa imba
Iyo yekutanga nzvimbo mune iyi kesi yaive yakakomba kushayikwa kwechiedza. Mushure mekufunga kwakadzama kwemugadziri, madziro ese aigona kubviswa akabviswa. Mugadziri akashandisa ringi danda chimiro kurongedza nzvimbo kuti ave nechokwadi chekutanga kukwirira kwenzvimbo. Panguva imwecheteyo, pakati penzvimbo dzinoverengeka, mugadziri akashandisa masuo akavhurika kugadzirisa dambudziko rechiedza. Izvi zvinobvumira kuunzwa kwechiedza munzira dzakawanda munzvimbo yakajairika uye zvinoita kuti imba yacho pachayo ive nyore maererano nemafambiro.
Pakutanga kwekutanga, muridzi akati zvichave zvakanaka kuve neimba yekudzidzira yehofisi yake. Saka, ichi chikumbiro chidiki hachina kutiomera. Takabatanidza imba yekutandarira nerekudzidza kuva chinhu chimwe. Dzimwe nguva vakuru vanogona kushanda pamba, uye pano neapo vana vanogona kuita basa ravo rechikoro. Imba yakanaka yekudzidza pamba, hupfumi hwekuchengetedza ruzivo, kubva panguva ino zvichienda mberi.
Nekuda kweiyo diki kukura kweimba, fanicha yakasarudzwa kuti igare zvakanaka uye iumbane, uye nyore kufamba famba. Izvi zvinoita kuti kufamba kwekamuri kuve nyore. Iyo yakavharwa fenicha dhizaini inowedzera kutaurirana kwemhuri. Rutivi rwese kumusoro kwebhuku rekabhuku nemasuwo ekabhini akagadzirwa pazasi ekuchengetedza. Pamusoro payo inosara sebhuku rakavhurika. Ese emabhuku emhuri uye zvinhu zvakachengetwa pano. Tichifunga nezve bhajeti, isu tinoisa kumusoro kwebhuku remabhuku. Isu tinogadzawo maviri madiki emagetsi emadziro zvakasiyana kuti tizadze kabhuku kabhuku nechiedza. Izvi zvinobatsira vagari kuti vawane iro bhuku rekuunganidza zviri nani.
Iyo mantel inogona kubata ndangariro diki diki idzo muridzi akadzura kubva mukufamba kwake, uye girazi rekushongedza nezvinhu zveChinese. Pamusoro pekushongedza, zvinodzora zvirinani mwenje uye nekuzvipinza mumba yekutandarira. Izvi zvinowedzerawo maonero ekuona kwenzvimbo. Chiedza uye kufefetedza zvese zviri pamwechete mune ino inoshamisa imba "yekare uye yakasakara".
Tichifunga nezve kukura kwenzvimbo uye kuchengetedzeka kwekufamba, mizhinji yemidziyo yakakombama. Izvi zvinoponesa nzvimbo uye hazvibate makumbo. Kuti tigadzire mararamiro ari nani evaridzi vedzimba, takawedzera nzvimbo yemoto mukamuri iyo imba yezana ramakore yaizove nayo. Isu tinovimba kuti nguva dzese muridzi wemba paanotenderedza choto, achiteerera kumumhanzi we retro uye achiona murazvo uchitamba, zvinoita sekuzvarwa muhupenyu hweParis mune kiyi diki.
Asingagumi mikana mukudzidza
Mune ino imba yechikoro, tichazoshandisa yakawanda yenguva nevana, saka TV yakabviswa kubva muimba yekutandarira. Mukusarudzwa kwesofa, takashandisa pekugara marongero. Imwe ndeye kusiya mutsara uri nani pane iyo nzvimbo uye chengetedza nzvimbo nzvimbo. Chechipiri, zvinogona kupa mhuri imwe nguva yekutaurirana.
Munzvimbo yakavhurika yekufunda, kabhuku kemabhuku kanotenderera kusvika kumadziro ekurara. Kwese uko vanhu vanoenda "chidzidzo". Iwo ese madziro eouki nhema mabhuku emashefu ane anoshamisa ekuchengetedza masimba. Izvi zvinogona kubata mabhuku uyezve nezvimwe zvekushongedza uye knick-knacks. Vhura "musuwo wakavanzika" webhuku remabhuku, inova imba inogara tete vacho. Mikova miviri inoshandiswa kugirazi regirazi, kuitira kuti mwenje ugone kuunzwa mukamuri diki yekurara. Muimba yatete, machira akaiswawo. Paanoda yega nzvimbo, anogona zvakare kuivhara ari ega.
Kugadzirisazve tambo yekudyira
Iyo 90-mita-mita-yekare imba inochengetedza iyo yekutanga kukwirira zvakanyanya sezvinobvira. Imba yekudyira yakasarudzwa mune yakachena yegungwa bhuruu. Gungwa nedenga ivara rimwe chete, uye denga rakakura. Izvi zvinoyeuchidza vanhu nezvedenga rebhuruu nemvura yebhuruu yeSaipan muzhizha, rinova iro rinoporesa ruvara rinoita kuti vanhu vanzwe kuwedzera rugare. Cherry inotumbuka pink mumba yekutandarira yakajeka, inotamba uye inoyevedza, uye iwo maviri mavara anopindirana neumwe kuumba hutongi hwekuona mumadhigirii akasiyana uye kuita nzvimbo yacho yakakomberedzwa nemhepo yekudanana.
Tichifunga nezvekushomeka kwenzvimbo yekuchengetera mukicheni, takashandisa madziro zvakanyanya sezvinobvira kugadzira yakavakirwa-mukati yekuchengetera kamuri. Izvi zvinokutendera iwe kuti uise zvimwe zvekubheka, zviyo zvekuseni kana kofi uye mabhegi eti, nezvimwewo Izvi zvinowedzera kushanda kwekicheni. Shamwari padzinouya, tinovhura stereo yake yemazambiringa uye tobva taridza marimba echiFrench mune ino imba yekudyira diki, senge mune imwe furati muParis. Inguva huru yekuve wakasununguka.
Iyo yakazara nzvimbo yenzvimbo yekudyira haina kunyanya kukura. 1.1m tafura yakatenderera inokwana mhuri yevanhu 3-4. Musuwo unotsvedza wekicheni une girazi kupera. Uku zvakare kuwedzera nzvimbo yekudyira zvinoonekwa. Musuwo unotsvedza unogona zvakare kuvharwa kupatsanura girisi uye utsi, izvo zviri nyore kwazvo uye zvinoshanda.
Heron anoendeswa kuimba yekurara
“Paunovhura musuwo wemba yekurara, iwo wakasiyana chaizvo ruvara. Chinese marambi, akasarudzika mazambiringa matsvuku switch, akapfava velvet goridhe mapiro, zvese zvakanaka kusvika sekuona kweziso! Dhizaini yakavanzwa inochengetedza nzvimbo mukamuri yekurara iri pakati nepakati. ”
Imba yekurara pakutanga yakanga isina nzvimbo yakazvimirira yekutarisa. Mushure mekufunga zvine mutsindo, mini cheki cheki yakawedzerwa nekukwereta nzvimbo diki yenharaunda yakajairwa. Mugadziri akaisikidzawo vharanda mukati. Mativi matatu egirazi mahwindo akakomberedza mukamuri kuunza mwenje wechiedza. Kunyangwe iri kunaya, haina kudzima zvachose kana isina magetsi. Pfungwa zhinji dzakaiswa mukutengwa kwemidziyo yakapfava. Kunyangwe iyo sarudzo yeswitch yaive yakasiyana.
Imba yepakutanga yaive imba yekugezera imwe chete. Kuti iite kuti ive yepamusoro, vagadziri vakakwereta chikamu chevheranda uye nemba yevana uye nehungwaru vakazvigadzira tenzi yekugezera. Vakagadzira bhavhu uye kunyura mukati. Kuti tidzivise kutaridzika kusingaoneki kwemusuwo wemba yekugezera wakatarisana nemubhedha, isu takaita musuwo wekugezera dhizaini isingaonekwe. Izvi zvakanaka uye zvinoshanda, kuuraya shiri mbiri nedombo rimwe.
Imba yevana "ichakura"
Ruvara rwebhuruu rwevhivy rakawedzerwawo mukamuri revana. Imba yemumba yese yevana yakanyatsogadzirwa. Iwo ma switch anonyatso sarudzwa. Inopa kuwedzera kufarira kune dhizaini dhizaini. Iyo yakasanganiswa dhizaini yewadhiropu, yakarembera kabati uye tatami mubhedha inowedzera iko kushandiswa kwenzvimbo yese. Ose muwadhiropu nenzvimbo iri pasi pemubhedha wetatami zvinogona kushandiswa pakuchengeta nekuchengetedza. Masherufu mazhinji akavhurwa anoiswa parutivi, kunyanya kupa mwana nzvimbo yake yega. Izvi zvinobvumira mwana kuti aratidze zvaunofarira uye kuravira kwake muhupenyu sezvaanokura.
Mwana ane ake mazhinji ekupenda uye modhi ndege. Iye anodawo kuratidza ake ese zvigadzirwa. Mugadziri akabatanidza nzvimbo dzasara, dzekufunda nekutamba, achisiya nzvimbo yakakura yechiitiko. Kune vana vadiki, midziyo iri mumba haifanirwe kunge yakanyanya kukwirira. Kana iwe uchida kurima kuzvimiririra kwevana, wobva watora matoyi, verenga mabhuku, tora uye tora mbatya, ndokumbira umupe kureba kwenzvimbo yekugona kwake kunopa mari. Iyo semi-yakavhurika yekuratidzira nzvimbo zvakare haina kutaridzika kunge yakazara. Izvi zvinogona zvakare kufunga danho rega rega rekukura kwemwana.
Kutanga kubva pamusuwo "shanduko huru"
Imba yepakutanga imba haina imba yekupinda. Pakange pasina basa rekuchengetedza shangu mushure mekupinda pamusuwo, ndoda kugona kugara nekuchinja shangu. Mushure mekunge tagadzirisa marongero, chetatu cheiyo yekutanga imba yekugezera yakapihwa mukova. Musuwo wakakombama waishandiswa sechikamu pakati penzvimbo dzekugara nedzokudyira kuti ugadzire mukova wakasiyana. Makamuri ekumusoro uye epasi matema uye machena shangu makabati anokwanisawo kugara akawanda eshangu mbiri.
Nzvimbo yeimba haina kukura, asi mazuva ese ehupenyu anoda kunyatso kuvakwa. Imba yekugezera iri padyo nefoyer inozadzwawo nepfungwa diki dzemuridzi. Girazi, kabhini rekugezera, uye kunyangwe bhokisi resipo zvese zvakanyatsosarudzwa nemuridzi. Izvi zvinopa iyo diki yekugezera nzvimbo maitiro ehupenyu.
Iyo Wallpaper mune yekupinda yakasarudzwa kubva kune cole & son theatre akateedzana. Muridzi wemba anoda mimhanzi. Iyi inonakidza yemitambo Wallpaper inoratidzira zvizere theatre yekufemerwa dhizaini. Tichisangana nezvinodiwa nemuridzi wemba, isu tinotenda kuti aesthetics neunyanzvi zvichavapo.
Dhizaini Yekutanga Dhizaini
Ronga dhizaini dhizaini
Zvakaoma mapoinzi ekugadzirisa zvakare.
IffKusiyana: imba yekugezera imwe inova dzimba mbiri dzekugezera (pakutanga paingova nembichana imwe chete uye haina kuuya nesink.
Yokutanga ndiyo iyo ine nhamba huru yemakamuri. (Iyo yepakutanga imba mhando haina yakazvimiririra yekupinda horo. Iyo tenzi yekurara hainawo yakazvimirira cheki cheki. Tinofanira kusangana ne3 yekurara + kudzidza kudzidza kupatsanura.)
③ Chinhu chakaomarara: nzvimbo yakajairika kushayikwa kwechiedza zvakanyanya. Imba yacho yakasviba uye yakanyorova (Mushure mekugara-yekudyira imba yakakomberedzwa nemadziro ekuparadzanisa pamativi matatu, inongovimba pawindo rekumabvazuva rekuvhenekera (Iri munzvimbo yakasviba gore rese.)
④ Pfungwa yakaoma: Kumusoro kwazara matanda. Denga reimba yese rinomanikidza kukwirira kwepasi. (Mushure mekubvisa madziro, nzvimbo dzese dzine makoramu dzinozove nedanda rakayambuka.)
Yemukati dhizaini / mwenje dhizaini / yakapfava midziyo ine / maruva dhizaini
Shuangbao Dhizaini yakavhenganiswa naXiao Zhang naShuyan Zhou muna 2013. Iyo inokwira-uye-inouya dhizaini dhizaini ine hunyanzvi uye hwakasiyana dhizaini yekufunga. Inopa zvemukati, zvakapfava kupa, zvekutengesa uye zvekugara dhizaini masevhisi. Isu tagara takagona pakusanganisa akawanda masitaera. Tichiri kuvandudza uye kuita zvakasiyana-siyana, isu tinotsvaga maitiro ekusundira miganho nekumisazve chiyero chakakodzera uye kubatana kwakakodzera kugadzira nzvimbo yakakwana uye yakabatana yevashandisi. Tinotenda kuti "hatiteveri zvakapusa fashoni yazvino, zvinokukodzera ndizvo zvakanakisa."
Pakapfuura :: Kuisirwa Art + Natural Elements, Kufuridzira Kusingaperi Kufungidzira KweRamangwana | MACONWAY DESIGN Zvadaro: Yakakwira-Giredhi Grey + Cardamom Girini, Mudiki Uye Yakakwira-Yemahara Kugara | Yuanhe Daqian
2021 / 08 / 15 3747
2021 / 08 / 14 3886
155㎡Circular Space, Zvizvarwa Zvitatu Kugara Pamwe Pasina Generation Gap ...
2021 / 08 / 13 4183